देउवाले केही गर्छन् कि भन्ने थियो तर आउनेबित्तिकै शैक्षिक माफियालाई मन्त्री बनाए: डा केसी (भिडिओ) :: Setopati
सुसन चौधरी काठमाडौं, साउन १२
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान बचाऊका लागि नागरिक आन्दोलनले कार्यक्रम गरेको छ।
माइतीघर मण्डलमा मंगलबार उभिएर प्रतिष्ठान बचाऊ र बदल प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धतासहित असमावेशी र भ्रष्ट नियुक्तिविरूद्ध उनीहरूले आवाज उठाएका हुन्।
कार्यक्रममा वक्ताहरू डा. गोविन्द केसी र मोहन साशंकरले मन्तव्य दिए भने रीमा केसीले कविता सुनाइन्।
‘प्रश्नहरूको कठघरामा मेरो देश’ शीर्षकमा कविता सुनाएकी रीमाले देशलाई कवितामार्फत् विभिन्न प्रश्नहरू सोधेकी थिइन्।
त्यसपछि मन्तव्य दिन आएका मोहन शाहशंकरले त्यहाँ उपस्थित अभियन्ताहरूको संख्या थोरै भए पनि लाखौं मान्छेको आवाज बोकेर आएको बताए।
ओली सरकार परिवर्तन भएपछि देशमा परिवर्तन आउँछ भन्ने लागे पनि पहिलेको जस्तै प्रवृत्ति देखिएकोमा उनले आपत्ति जनाए।
‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा माफियालाई संरक्षण गरेर भाँडभैलो गर्ने जुन प्रवृत्ति ओली सरकारमा थियो, त्यो देउवामा पनि देखियो। ओली सरकार संघीयताको विरोधी हुनुहुन्थ्यो। अहिले त्यही प्रवृत्ति देउवामा पनि देखियो,’ उनले भने, ‘यो राज्य संयन्त्र समावेशिताको पक्षमा छैन। यो खबरदारी माध्यमबाट राज्यलाई सचेत बनाउनुपर्छ।’
डा. गोविन्द केसीले पनि भने, ‘शेरबहादुर देउवाले केही गर्छन् कि भन्ने थियो। तर आउनेबित्तिकै शैक्षिक माफियालाई मन्त्री बनाए। राम्रो छवि भएका मान्छेहरू धेरै थिए तर उनले पनि माफियालाई साथ दिए। यही तरिकाले माफियालाई पदहरू विक्री गर्ने प्रक्रिया चलिरहने हो भने जसरी ओली सरकारविरूद्ध लड्नेहरू शेरबहादुरका लागि पनि लड्छन्।’
उनले अगाडि भने, ‘गैरकानुनी कुरामा हामी सहमत हुन सक्दैनौं। विधिको शासन स्थापित गर्न हामी लडिरहनेछौं।’
आजै उनले प्रधानमन्त्रीलाई खबरदारी पत्रसमेत लेखेका छन् जसमार्फत् उनले नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई तत्काल पदमुक्त गर्न माग राखेका छन्।
‘नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले या त स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा रहेको आफ्नो सारा लगानीबाट तत्काल अलग हटेर स्वार्थको द्वन्द्व हुने अवस्था अन्त गरून्। नत्र भने उनलाई तत्काल पदमुक्त गरियोस्,’ केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
उनले अब उपरान्त व्यापारी वा व्यवसायीहरूले नेता, तिनका परिवारका सदस्यलाई चोर बाटोबाट सांसद र मन्त्री हुने, सार्वजनिक संस्थाहरू डुबाउने, आफ्नो व्यवसायको हित हुने गरी कानुन बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने अवस्था कहिल्यै नआओस् भनेका छन्।
केसीले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा हाल चलिरहेको आन्दोलनका सबै माग पूरा गरेर संस्था सुधारलाई अघि बढाउन माग गरेका छन्। त्यसका लागि जालसाजी र भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका पदाधिकारीहरूलाई तत्काल पदमुक्त गर्न माग गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १२, २०७८, १९:१९:००